OLAN’NY DOANY ATSIMO MAHAJANGA : Mpanao gazety iray nadinin’ny Polisy mpanao famotorana
Nanjary lalan-kitan-kisoa ny fanaovana ny mpanao gazety eto Mahajanga ho vavolombelon’ny olana eo anivon’ny vondrona politika, fikambanan na adin’olon-tsotra eny amin’ny fiaraha-monina. 30 juin 2017
Ny tolakandron’ny talata 27 jona teo no nantsoina tany amin’ny biraon’ny Polisy mpanao famotorana eny Mangarivotra i Anicet Rahasimandimby, mpanao gazety ao amin’ny RTN (Radio Télé-Naka). Momba ny raharaha eny amin’ny Doany atsimo no antony.
Nampiantso mpanao gazety mantsy ny Fahatelo sy ny mpomba azy ny 21 jona, izay milaza ny firosoana ho amin’ny Fanompoa, izay hotanterahana amin’ny 10 jolay izao, manoloana ireo resaka sy taratasy miely fa tsy ho tanteraka velively izany. Nampitandrina izy fa hitondra ny raharaha any amin’ny Fitsarana raha toa ka mbola misy hatrany milaza fa tsy hisy izany.
Ny 22 jona dia nampiantso mpanao gazety ihany koa ny an-daniny izay tarihin’ny Manantany, ka mbola nanamafy hatrany fa “tsy hisy Fanompoa mandeha raha toa ka tsy miala amin’ny toerany ny Fahatelo”. Marihina eto anefa fa samy manana zo hiresaka sy hanao filazana amin’ny haino aman-jery avokoa ny rehetra hanambara ny hetahetany, ary indrindra koa manana fahafahana mamaly izany izay mahatsiaro voatohintohina.
Na izany aza anefa tsy natao ho mpanelanelana ny mpanao gazety ary tsy natao ho fitaovana politika koa. Vao iray volana mantsy izay no nisy tahaka izao teto Mahajanga ary niteraka olana be hatramin’izao izany, satria voaroaka tamin’ny asany ilay mpanao gazety sy mpanentana iray.
Koa ampy izay ny fanaovana fitaovana ny mpanao gazety amin’ny olana maro samihafa entina amin’ny haino aman-jery. Aleo hanao ny asany am-pilaminana ny mpanao gazety.